Ukutsalwa komhlaba endaweni yemigodi yomhlaba ngokuchaseneyo notshintsho lwemozulu
5. Novemba 2011 Oliver Bienkowski
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 5. Novemba 2011
Ukulahla amadada emithi ngezithole ezigqityiweyo kunye nesichumisi
Ukutshala amahlathi endaweni yezigcayiseli. Elona phephandaba likhulu eMorocco linike ingxelo namhlanje ngesindululo sethu kwiPalamente yase-Australia ukuba icele uKumkani waseMoroccan ukuba asinike inqwelo-moya yezigcayiseli iHercules-C130 ukuze sikwazi ukuyiguqula ukuze iphinde ibenamahlathi aseMorocco kunye namahlathi ase-Australia. Umzi mveliso omncinci apha kwindawo yethu yaseMorocco kulindeleke ukuba uvelise iidolo zomthi eziye zaphoswa. Kodwa asinakwenza nto ngaphandle koncedo lwenkosi yaseMorocco. Kuba engaphendulanga kwiileta zethu zokugqibela, asicingi nawaphi na amathuba, kodwa sijonge phambili kwizimanga ezintle.
Imitya yemithi evela kumshicileli we-3D
Ukutsalwa komhlaba endaweni yemigodi yomhlaba ngokuchaseneyo notshintsho lwemozulu Aprili 21st, 2020Oliver Bienkowski
ephawulweyo: ukuphucwa, bush umlilo, umlilo, hercules, landmines, ami, ukulondolozwa, upcycling